दुई मुखे कालो सर्प देख्नुभएकाे छ? यस्तो छ नसोचेको लाभ, देख्ने बित्तिकै ॐ लेखि सेयर गर्नुहोला – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > दुई मुखे कालो सर्प देख्नुभएकाे छ? यस्तो छ नसोचेको लाभ, देख्ने बित्तिकै ॐ लेखि सेयर गर्नुहोला
admin October 5, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति	0
काठमाडौ । विश्वमा विभिन्न किसिमका सर्पहरु पाइन्छ ।हामिलाई हाम्रो घर खेत परीपरी पाइने बिभिन्न सपहरु बारे मात्र थाँहा छ । यस्तै भारतमा पनि एक अनौठो दुई मुखे सर्प पाइन्छ । भारतको राजस्थानस्थित थार मरभुमीमा दुई मुखे सर्प धेरै नै पाइन्छ । यस सर्पलाई वैज्ञानिकहरुले रेड बोआ सर्प नाम दिएका छन् । तपाईलाई थाहाँ छ ? खाडी देशमा यो सर्प खानाले सबै किसीमका बिरामी निको हुने विश्वास गरिन्छ ।
साथै यो सर्प खाएमा सधै जवान देखिने पनि बताइन्छ । खाडीका मुलुकका केही मानिसहरुले यो सर्प खाँएमा ‘यौ’न’ ‘श’क्ति’ बढ्ने पनि विश्वास गर्छन् । यसलाई ‘यौ’न’ ‘श’क्ति’ वद्र्ध’क औषधीको रुपमा पनि मान्ने गर्छन् । त्यहाँका मानिसहरु यसलाई औषधिको रुपमा सेवन गर्दै आएको पनि बताइन्छ ।
यहाँका मानिसहरुले यस सर्पले मानिसमा दैवीशक्ति प्राप्त भई भाग्य नै बदलिने विश्वास गर्छन् । वैज्ञानिकहरुले दुई मुखे सर्प ‘वि’षा’लु’ भएपनि । आजसम्म कोही मानिसलाई ‘न’टो’के’को पनि बताउछन् । योे सर्प ‘वि’षा’लु’ भएपनि कसैलाई हानी पनि नगर्ने बताइन्छ ।जनबोली ।
आज बुधवार श्रीकृष्णको पुजा अर्चना गरे मिल्नेछ यस्तो सफलता! जय श्रीकृष्णजी कि!